Hohadihadina ny fandanian-tsoliky ny fanjakana | NewsMada
Hohadihadina ny fandanian-tsoliky ny fanjakana
Anisan’ny nomarihin’ny filoha Rajoelina manokana tao anatin’ny taratasy nomeny ny minisitra tsirairay, ny 24 jona lasa teo, ny lafiny solika. Nomeny toromarika manokana ny minisitry ny Angovo sy ny akoranafo, hijery akaiky, hanadihady ny minisitera rehetra sy ny rantsa-mangaikany ny fandaniam-bola mikasika ny solika. Mila jerena ny fatran’ny solika tena ampiasaina isaky ny fiaram-panjakana isan-tsokajiny sy izay voasoratra novinavinain’ny tetibola hijerena ny fandaniam-poana.
Manampy izany, nanome toromarika ny minisiteran’ny Angovo koa ny filoha, mikasika ny fividianana gropy mpamokatra herinaratra miisa fito, nambara fa mamokatra herinaratra 1,2 MW farafahekeliny, nafarana tany Belzika. Hadihadina miaraka amin’izany koa ny kojakoja sy fampitaovana hafa miaraka amin’ireo mpandraharaha eto an-toerana amin’ny fampiasana ireo gropy mandeha amin’ny solika mavesatra.
“Brise lame” tsy natao any Soanierana Ivongo
Ho an’ny minisitry ny Fizahantany sy ny fitaterana ary ny famantarana ny toetr’andro, mila jereny manokana ny fitantanana ao amin’ny zotra an-dalamby Fianarantsoa-Manakara (FCE). Mila hadihadina koa ny fanomezana tsenam-barotra mikasika ny fametrahana ny sisim-bato miaro onja “brise lame” any Soanierana Ivongo, nomena ny taona 2018, nefa tsy mbola misy asa mijoro hatramin’izao, na dia efa namoahana ampaham-bola aza.
Tsy mihoatra ny 450 tapitrisa Ar ny birao iray
Nomen’ny filoha Rajoelina toromarika manokana koa ny minisitry ny Asa. Mila ampahafantarina any amin’ny faritra ary ao anatin’ny fotoana haingana ny fanamboarana ireo biraom-paritry ny ministera toy ny any amin’ny faritra Anosy, Itasy, Betsiboka, Amoron’i Mania, Menabe, Manakara, Sava ary Analanjirofo. Manodidina ny 450 tapitrisa ariary ny fanaovana ny biraom-paritra iray ary mila hatao mangarahara izany.
Ilaina ihany koa ny fandefasana mazava ny tsenam-barotra manodidina ny fividianana fiara tsy mataho-dalana miisa enina izay tsy tokony hihoatra ny 120 Millions Ar ny iray ary fiara matanjaka.